Home Wararka Kenya oo dib u dhigtay xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kakuma
Kenya oo dib u dhigtay xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kakuma
Dadaab Refugee Camp, Kenya: Dadaab camp in northeast Kenya is the world's largest refugee settlement, and hosts more than a third of a million Somali refugees. In 2011 a severe drought pushed tens of thousands of people from their homes, swelling the ranks of Kenya’s Dadaab refugee camp. With the International Organization of Migration predicting 200 million environmentally displaced people by the year 2050, countless more Somalis will likely be pushed across the country’s borders and to the seas. (Photo by Nichole Sobecki)
Ka dib kulan ay yeesheen dowladda Kenya iyo Hay’adda Qaxootiga Caalamiga (UNCHR), Kenya ayaa ku dhawaaqday inay dib u dhigtey xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kakuma illaa dhamaadka bisha Juun ee sanadka 2022-ka. Talaabadan cusub ayay dowlada Kenya u gudbisay Hay’adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay u qaabilsan marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano UNHCR.
Go’aanka Kenya ayaa waxaa shaaciyay wasiirka amniga gudaha ee Kenya, Fred Matiangí, kaddib markii uu shalay gelinkii dambe kulan magaalada Nairobi kula yeeshay madaxa hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, Flippo Grandi. Wasiirka amniga gudaha ee Kenya Fred Matiangí wuxuu kaloo sheegay in mas’uuliyiin ka kala socda dowladda Kenya iyo hay’adda Qramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay isla garteen in hannaanka xeryahaas lagu xirayo la bilaabo 5-ta bisha May ee 2022-ka.
Qorshaha horay loogu heshiiyay ayaa ahaa inaan cidna qasab lagu rarin oo qaxootiga ay iskood dalkooda ugu laabtaan ama la siiyo shati ay uga shaqaysan karaan ama ku degi karaan dalalka ku bahoobay Bulshada Bariga Afrika. Dowladda Kenya ayaa bishii Maarso waxa ay Qaramada Midoobay in muddo laba todobaad ah ay kula timaado hannaankii lagu xiri lahaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma oo ay ku jiraan in ka badan 400,000 oo qof.
Dowlada Kenya ayaa waxa ay qaxootigaas martigelinaysay muddo ka badan 30 sanadood ah, dowladduna waxa ay haatan sheegaysaa in aanay awood u lahayn inay dadkaas sii hayso maadaama dhaqaale ahaan lagu jiro xilli adag. Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR waxay sheegtay in go’aankan uu saameyn ku yeelan doono dadka qaxootiga ah ee ku nool Kenya xilli uu dunida saameeyay safmarka Karoona.